Izizathu zokugqithiswa kwexesha elizayo likamama zininzi - isithintelo esivela kwimpilo esempilweni, kunye nokukhanyela imikhuba yesikhathi eside (iikomityi zekhofi ekuseni!), Kunye noxinzelelo lwexanduva lwexesha elizayo. Kukho izizathu ezininzi, kodwa kukho iindlela ezininzi zokujamelana nokuxhalabisa. Sifunda ukuphumla kwienkwenkwezi. Emva koko, izimbangela zokuxhalaba kwi-trimester yesithathu zichanekile.
Ngenguqu kwimvelaphi ye-hormonal, yonke into iyakhiwa kabusha, njenge-transformer. Yonke le ngumthwalo ongaqhelekanga wenkqubo yeentlanzi, onokuyibona njengesizathu sokungabikho kwemfuduko encinci (ngamanye amaxesha kuveliswe) ukuphazamiseka kwemihla ngemihla. Ukulindela ukuba ukhathazeka okwenyukayo kuya kuphuma emva kokuzalwa komntwana kungenanto. Kunoko, iyakhula ibe yipenji emva kokuzalwa. Ngoko ke, umntu kufuneka afunde ukujamelana neemeko ezixinzelelekileyo ukusuka kwiintsuku zokuqala zokukhulelwa.
Ikhono lokuzinza ukuzinza kubaluleke kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo luncedo. Ukuze ukwazi ukuyiqonda, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba zonke iingxaki ziyisizathu sokusungula indlela yokucinezeleka. Eyona nto ibangela ukuxhalaba kwi-trimester yesithathu, kuba kuphela kuba thina sibaphakamisela kule nqanaba. Ngelishwa, akuzona zonke izizathu zokukhathazeka ezingasuswa kwintando. Awukwazi ukutshintsha imozulu, imikhwa kunye nomlinge wabanye abantu, ubuncinane ngandlela-thile ichaphazela amaxabiso, irhafu kunye norhulumente. Kodwa unokuzama ukutshintsha, ukucinga kunye nesimo sengqondo kwiimeko ezithile.
Ukufumana ibhalansi yangaphakathi
Ngaphambi kokuba uvumelane nehlabathi langaphandle, kufuneka ufumane ukuvumelana nawe. Inyaniso ecacileyo iyaqondwa kakuhle "kumama omabini" uMnu. Uma Thurman, oye waqhuba i-yoga iminyaka engaphezu kweyishumi. Isiphumo sibonakala. Akagcini nje ukuzinzisa ngokulula ukulinganisela kwengqondo ngexesha lokukhulelwa, kodwa ngokukhawuleza ubuyele kwisimo esihle ngokwenyama emva kokubeletha.
Enye yezindlela ezifanelekileyo kakhulu zokujongana noxinzelelo olufanelekileyo kukuguqula ukusuka komnye umsebenzi ukuya kwenye. Ukuphumla okunyanzelekileyo, okuxhatshazwa ngokucacileyo ngabasetyhini abaninzi abakhulelweyo, akunakuqhelekanga ukuba unako ukususa imeko phantsi komhlaba. U-Angelina Jolie akazange amise uNia Dance nangona ekhulelwe. Ezi zinto zidibanisa inamba yemimandla yomdaniso, izixhobo zobugcisa bokulwa, i-gymnastics yezempilo, i-aerobics.
Yongeza kwimibhobho yakho ebomvu
Umbala ngamnye unokuzulazanyiswa, ukusibeka kwindlela yokusebenza eyahlukileyo. Zama ukuzungezezela izinto ze-shades ezifanelekileyo: iimpahla, izimonyo, iingubo zokulala kunye nombala wesitya sakho sinokuchaphazeleka. Ukuba uziva unqabile, khetha i-blue shades okanye i-brown shades, ungabi nethemba-yenza abahlobo kunye ne-orange, uzive unganakwa-khetha ukomvu. Le nyaniso elula iye yahlala ebomini bukaCatherine Catherine Zeta Jones. Ngona umkhonto okhangayo akazange akhohlwe ukupenda umlomo wakhe aze aphendule. Nabani na ongayesabi imibala eqaqambileyo yokwenza, akakwazi ukufumana uxinzelelo, "esho.
Ukuxhamla kwimimandla yendalo
Ioyile ezifunekayo zemvelo ziphucula iimoya. Isalathisi singena kwiziko elinjengeengqungquthela yengqondo, ecaleni kwindlela elawula iimvakalelo zethu. Kwaye, nabo banako ukuphazamisa umgangatho wama-hormone, umsebenzi we-system ne-respiratory system, kunye ne-circulatory system. Umama onokuhlangenwe nakho uCindy Crawford uye wafumana ngokuphindaphindiweyo amandla okumangalisa amavumba amnandi. Ngexesha lokukhulelwa kwesibili, i-supermodel yayithwala ibhotile yeoli ebalulekileyo ye-orange ebomvu, eyamnceda kwiimeko ezixakekileyo. Into eyona nto kukuba iphunga leoli kufuneka libe lumnandi.
Ukuze uhlasele ukukhula kwengcinezelo kunye nokungabi nzuzo, akukho nto ingcono kunokuba luncedo kwabanye abantu. Ubomi bentlalo esisebenzayo nje asishiyi ixesha lokubonakalisa ubunzima kunye neemvakalelo. Kwakuseklasini zokunceda ukuba uChulpan Khamatova athole indawo yakhe, eyazala abancinci ababini emsebenzini kunye nomsebenzi onobubele. Ngexesha lokukhulelwa kwaye unako ukubonelela ngoncedo olungenako kulabo abayidingayo. Ngokomzekelo, bathathe inxaxheba ekuqokeleleleni izinto kwiintsana ezisuka kwiNtsapho okanye ukunyusa imali kumayeza egulayo.
Ziziphi iingxaki ezichaphazela impilo
Ingxaki yexhala ihlobene ngokusondeleyo komnye wemisebenzi ebaluleke kakhulu yomzimba - ukukwazi ukuzivumelanisa nokutshintsha. Ngelishwa, umzimba awukwazi ukusebenza kumda wamandla ngonaphakade. Ukuba ubunzima abuyisombululi ngokukhawuleza, kwaye ukuxhatshazwa kwandisa kwaye kwanda, ngoko ke ukuveliswa kwama-hormone oxinzelelo kunye nokuxhalaba kwanda. Kwiimveliso zabo, umzimba uchitha iindawo ezininzi zokugcina iivithamini C no-B, i-zinc, i-magnesium kunye namanye amaminerali ayimfuneko ukugcina amandla kunye nempilo yomntwana.
Ngokuxhomekeka, kwimiba ecinezelekileyo, unokufumana ezinye iingenelo. Abafazi abakhulelweyo banokuphuhliswa kakuhle "ngengqondo yesithandathu". Yaye ukuba unenkxalabo okanye udidekile, mhlawumbi kunengqiqo ukuqonda - ngokukhawuleza izizathu zengqondo yakho yokudandatheka ayikho nje entloko yakho ...
Nangona kunjalo, ukuba ugqiba ukuba udala umhlaba wakho ngeemvakalelo ezingadingekile ngezandla zakho, khawuleza uqondise iinzame zakho ekunciphiseni ukunyaniseka kweemfuno kunye nokulwa nemiphumo enokubakho kwengqondo yakho.
Iseluleko kunye nemibukiso, ukudibana rhoqo kunye nabahlobo. Ukunxibelelana, ubugcisa kunye nomsebenzi yintandokazi ephumayo, inika umdla uvuyo, kunye namava amnandi kuphela.
Hlala uye uzame ukuphumla. Ukwenza oku, thabatha ukuphefumla okuchukumisayo kunye nokuphuma kwamanzi. Ukutshekisha umzimba wakho. Fumana indawo apho uzizwa unzima khona, uxinzelelo, ubunzima. Ngethuba lokuphefumla, cinga indlela ukuxhatshazwa kuhamba ngayo emoyeni. Emva koko uxinzelelo oluthile (ubuncinci besibini) kwaye uphumule amaqela ahlukeneyo emisipha emzimbeni ngale ndlela elandelayo: izandla, izibhengezo, ibhinqa lamagxa, izikhwelo, izigqoko, izihlunu zamathole.
Thatha indawo epholileyo kwaye uvale amehlo akho. Ukuphefumula kwisigqi esilandelayo: bhala ngeempumlo kwiibalo ezi-4, bamba umoya wakho kwii-akhawunti ze-6, uphumelele ngomlomo ogxininisiweyo kwiingxelo ezi-8. Ukugxininisa ngokupheleleyo ekuphefumla. Zama ukucinga indlela i-oksijini ezalisa ngayo imiphunga yakho kwaye isasazeka yonke umzimba wakho. Le ngenye yeendlela eziphambili kunye ezikhawulezayo zokuphelisa uxhalaba!
Umthetho ngokusebenzisa imifanekiso
Kubaluleke kakhulu ukucacisa ukuba ungeyonto engathandekiyo, eyona nto ingumthombo wokuxhalabisa. Hlonipha ngokunyanisekileyo ukuba uyacaphuka ngo-A ngenxa yokuba ... okanye uyacaphuka ukuba le meko ... ". Thetha eli binzana ngamaxesha amaninzi ngokuvakalayo.
Ukuba uvakalelwa ngumsindo okanye umsindo kumntu, oku kulandelayo kuya kuyenza. Khawucinge ngomxhaphazi wakho, kodwa unciphise ubukhulu bebhokisi lebhokisi. Beka kwideskiti yakho, kwaye ngoku ucinga ukuba uzama ukuphuma njani. Okanye umenze enze into ehlekisayo, ngokufanelekileyo, ubuncinane gxuma emlenzeni omnye.
Ukusebenza nexesha elidlulileyo
Ukuba kwixesha elidlulileyo kukho iziganeko ezingamnandi ezingakuvumeli ukuba uphile ngokuthula, zicinge njengoluhlu lweefoto. Ecacileyo, bhetele! Kwaye ngoku ubeke ngengqondo kwi-albhamu kwi-shelf kwaye "ubukele" njengoko iifoto ziphela.
Ukuba ukhathazeke ngokweqile malunga neziganeko ezibalulekileyo, zama ukuzicingela ngokubanzi iinkcukacha ngokuzeleyo kwaye kuphela ekukhanyeni okulungileyo. Zama ukubheka ngokwakho ukusuka kwicala - indlela okhangeleka ngayo, ukuba ukhulula njani ukuhamba kwakho, ngumntu onomusa. Emva kokugqiba umsebenzo, sekuyisikhathi sokwenza uluhlu lwamandla akho kwintshukumo yemnandi. Kwaye uhlale usondele.
Ukuba ngokukhawuleza, ngokukhawuleza, u "gqubuthe" ngokugqithiseleyo, ungatshintshi ingqalelo kwizinto ezikujikelezayo. Ubuncinane nje umzuzwana unqamle kwi nyaniso kwaye uqale ukuchaza ngengqondo indawo ejikelezileyo. Ngokwenene ngomzuzwana uya kuziva ngathi "uvumeleke" kwaye unokubuyela enyanisweni-sele uhlala uxolo kwaye uxolo.
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-34
UkuNakekelwa Kwezesikhumba kunye Nesikhokelo
Indlela yokulwa nokuxhalabisa ngexesha lokukhulelwa
I-Yarina yoNyango - umthamo wezonyango ophantsi ngomlomo kunye nomsebenzi onxamnye no-androgenic
Indlela yokugcina isimo sengqondo ngexesha lokukhulelwa?
IHormone oxytocin, izizathu
Ukukhipha isisu ekuqaleni kokukhulelwa
Imibuzo yokuqala kumntu
Ummeli uNonna Grishaeva kunye nosapho lwakhe olutsha
Isaladi kunye nenkukhu, utamatisi kunye noshizi oluhlaza okwesibhakabhaka
I-Steble celery: izakhiwo zokuphilisa
I-Horoscope ye-Aquarius-Abafazi ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
I-pearl ibhasi kwi microwave
Ungagcina njani iimpawu zezilwanyana?
I-Kid nolwandle: Imithetho eyi-3 yokunciphisa abantwana
Indlela yokulahlekelwa isisindo ebusika
IRosehips ukuze ilahlekelwe ngumzimba
Indlela yokupheka inyama yenkomo nge-prunes kwi-multivariate, iresiphi ngesithombe
Ukuthandana nokulala ngesinye ubusuku
I-pedicure efanelekileyo ekhaya
Inkcazo yesi sifo ngolimi
Kunokuba izithambiso zamaminerali zi luncedo